Mapato eMDC Anoti VaMugabe Havangaite Zano Ndega Pakutara Zuva reSarudzo
Kubvumbi 11, 2013
HARARE — Zvikwata zviviri zveMDC zvinoti mapato ese ari muhururumende ano fanira kuwirirana zuva richaitwa sarudzo uye kana izvi zvikasaitika sangano reSADC richipindira panyaya iyi.
Vachitaura kuNational Press Club pamusoro pesarudzo neChitatu manheru, mutevedzeri wemubati wehomwe muMDC inotungamirirwa VaMorgan Tsvangirai, VaElton Mangoma, pamwe nemunyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, Amai Priscillar Misihairabwi-Mushonga vakati hakuna bato kana mutungamiri anesimba rekutara zuva resarudzo ega uye panofanira kuva newirirano pamapato ese.
Vaviri ava vakati kunyange hazvo mapato ese aine mazuva aanoda kuti aitwe sarudzo, pari zvino zuva chairo richaitwa sarudzo harisati rabvumiranwa.
VaMangoma vakati pane zvakawanda zvino fanira kuitwa zvakaita zuva iri risati ratarwa zvakaita sekuti vemauto vanofanira kuita chisungo chekuti vacharemekedza zvinenge zvabuda musarudzo, kuvandudzwa kwemashandiro evatapi venhau pamwe nekuona kuti munyika mave nerunyararo nerusununguko rwekuti vanhu vaite misangano vasingavhiringwe.
VaMangoma vanotsanangura kuti kana izvi zvichinge zvaitika sangano reSADC ndoparichapa mvumo yekuti nyika ichiite sarudzo. Amai Misihairambwi-Mushonga naVaMangoma vakatiwo chimwe chichatariswa zuva resarudzo risati ratarwa inyaya yemusangano weUnited Nations World Tourism uyo uchaitwa kuVictoria Falls neLivingstone muna Nyamavhuvhu.
Vakati musangano uyu wakakosha munyika uye hurumende inofanira kutora danho rekuti musangano uyu hauvhiringwe nenyaya dzesarudzo. Amai Misihairambwi-Mushonga navaMangoma vakati sezvo hupenyu hweparamende huchipera muna Chikumi, zvakakosha kuti nyika iite sarudzo nekukasika sezvo zvisina kunaka kuti hurumende itonge pasina paramende.
Amai Misihairambwi-Mushonga vakati zvakakosha kuti mapato ese ari muhurumende agadzirise mitemo yese inoda kugadzirwa sarudzo yeparamende isati yavhara nekuti kana izvi zvikasaitika zvinoreva kuti panezenge pava kushandiswa mutemo wePresidential Temporary measures act kugadzirisa zvinenge zvichidiwa.
Vakati izvi hazvina kunaka sezvo VaMugabe vachizokwanisa kuita zvavanoda kana zvinofadza batao ravo chete.
Panyaya yekuti mapato ese abatane pakurwisana neZanu-PF musarudzo, VaMangoma vakati bato ravo rakazvipira kushanda nemapato ese mukuunza Zimbabwe ine hutongi hwejekerere.
Amai Misihairambwi-Mushonga vakatiwo bato ravo rinodawo kushanda nemamwe mapato asi vakati zvakaoma kuita mubatanidzwa wemapato sezvo patove nekurwisana mukati memapato aya nekuda kwesarudzo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvikwata zveMDC zvese pamwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika zvinofanira kubatana musarudzo kuti zvipedze hwavanoti hutongi hwehudzvanyiriri hweZanu-PF.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti masangano aya abatane kuti apedze hutongo hwaVaMugabe.
Vati zvakabuda musarudzo dza 2008 zvinoratidza kuti dai mapato aya akapinda musarudzo idzi akabatana vamugabe vangadai vave nenhoroondo.
Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiriri wenyika, matunhu nemakunzuru gore rino risati rapera.